Imibala engu-15 ye-Eyeshadow Palette Makeup, i-Pigmented High, i-Waterproof & ihlala isikhathi eside i-Professional Makeup Matte Nudes Shimmer Natural Eyes Shadow Easy to Blend.
Eyokuqala:Ukusetshenziswa Kwesikhathi Eside: Usebenzisa le nto, izohlala isebenze usuku lonke. Ngemibala enombala futhi ehlala isikhathi eside, gcina ukwakheka kwe-eyeshadow yakho okuhle isikhathi eside.
I-disc esebenzayo yezimonyo eziningi - I-JOYO shadow shadow disc inezinhlobo eziyi-15 zezinguquko ezisebenza kakhulu zezithunzi zamehlo, kufaka phakathi i-5 color pearlescent ne-10 matte yemvelo yemvelo. Okugqamile, ukungathathi hlangothi, ukugqama noma ukuxuba.
Ababili bokuqala:15umbala wempuphu,Usebenzisa ama-shades asetshenziswa kakhulu, kuqinisekisa ukufana kombala wesikhumba nokuqedwa kwemvelo. Ikhwalithi esezingeni eliphezulu futhi isebenziseka kalula futhi kulula ukuyisebenzisa ukugqoka kalula, kulula ukuyisebenzisa ngebhulashi lokufihla, elihlangana kahle kakhulu ukudala umthunzi owudingayo.
Imibala eqinile, imibala enemibala eqinile, egcina izimonyo zamehlo ezinhle. Isazi sezimonyo esincomekayo siphakamisa ukufaka ithoni yesikhumba esondele kakhulu esikhunjeni, kusuka kulayini we-eyelash kuya kwithambo le-brow, ukuze kuqinisekiswe ukuhlanganiswa okungenamthungo kwazo zonke izithunzi zamehlo. Okupinki nokubomvu nokuningi.
Izintathu zokuqala:Isidlo sombala Iphalethi ngayinye i-eyeshades elula yokwakha eguqulwe kuwo wonke amathoni esikhumba, i-pigment enamandla, ukunamathela okuqinile. Ukuhlala okuhlala isikhathi eside, ukugqoka kwamahora angu-8 okungapheli, ubufakazi bamanzi, gcina ukwakheka kwamehlo akho okuhle isikhathi eside.
Izine zokuqala:Iphalethi lothingo lwenkosazana, le ngqimba yesithunzi sombala oqukethe imibala egqamile engu-18 kusuka kokusomi kuya kokuphinki okukhanyayo, nakho konke okudingekayo ukudluliselwa kumajwabu amehlo. Le disc yesithunzela yamehlo enombala kakhulu izokusiza ukuthi udale ukubukeka okuhle kakhulu.
Ukuvinjelwa kwamanzi okuhlala njalo: umbala ohlala njalo, ithunzi elikhanyayo lemehlo, ukugqoka okulula nokuhlanza okulula. Ipuleti lethu le-Eyeshadow kulula kakhulu ukulisebenzisa (empeleni, kungcono ukusebenzisa iminwe esikhundleni samabhulashi).
Izinketho ezahlukahlukene ongakhetha kuzo: kulula kakhulu ukugcoba, kulula ukukuxuba, ukukunikeza ukusebenziseka okungenakuqhathaniswa futhi kube lula. Ifomula le-powder elisebenza ngobushelelezi libushelelezi, lakha ukubukeka kwamehlo noma ukubukeka kwansuku zonke. Lesi sithunzi seso leso singasetshenziswa ebusweni.
Dala ukwakheka okungenamkhawulo, okulungele imicimbi eyahlukene, njengamasethi wokwenza nsuku zonke, ukwakheka, izixazululo zokwakheka kokulingisa, kanye nokwakheka kweHolide. Isipho esihle samantombazane, izintokazi, izintokazi, usuku lokuzalwa, ukhisimuzi, usuku lomama, usuku lwezithandani, njll
Langaphambilini Ukwakheka kweso-BD15-COOL
Olandelayo: Ukwenza ubuso-i-BD-Blush
JOYO © Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, I-Mini Lipstick, Amabhulashi we-Makeup ahamba phambili, I-Lipstick ekhanyayo, Khipha ku-internet Cream Eyeshadow, Igolide Lamehlo, I-Matte Eyeshadow Palette, Yonke Imikhiqizo